Etu esi wụnye mkpọ asụsụ na Windows, gụnyere Spanish | Akụkọ akụrụngwa
You chọrọ ịma ka esi wụnye mkpọ asụsụ na Windows 7 ma ọ bụ ụdị ọzọ nke sistemụ Microsoft? N'ihi eziokwu ahụ bụ na Microsoft bịara na-enye ya mbipute nke Windows 10 na ikpe version na Oghere Usoro ọgụgụ gụnyere, ọtụtụ mmadụ ebudatara ya ma ugbu a ha na-anwale ya chọpụta atụmatụ ọhụrụ ya.
Agbanyeghị na nke a bụ oke akụkọ, ọ dị nwute na ụdị dị iche iche anyị nwere ike ibudata naanị n'asụsụ ole na ole. O doro anya na n'oge na-adịghị anya nchịkọta asụsụ maka Windows 10 ga-apụta na Microsoft dị ka mmelite, ma ọ bụ dị ka faịlụ ibudata na sava ha. N'ihi nke a, ugbu a anyị ga-ekwupụta aghụghọ iji wụnye mkpọ asụsụ na Windows ga-enyere gị aka mgbe ị na-ahazi sistemụ arụmọrụ a na asụsụ anyị chọrọ.
1 Etu esi wụnye mkpọ asụsụ na Windows
2 Etu esi ebudata asụsụ Spanish na Windows 10
2.1 Etu ị ga-esi gbanwee n'etiti asụsụ na Windows 10
3 Etu esi ebudata asụsụ Spanish na Windows 8.x
4 Etu esi ebudata asụsụ Spanish na Windows 7
Enwere ike iji aghụghọ anyị ga-atụ aro ugbu a site na Windows 7 gaa n'ihu ma ọ bụrụhaala mkpọ asụsụ anyị nwere mmasị na ya; Iji mee nke a, anyị na-atụ aro ka ị soro usoro ndị a:
Bido oge Windows gị.
Ugbu a ị jirila ụzọ mkpirisi keyboard Nweta + R.
N'ime oghere dee: LPKSupup
Site ebe a ị ga-enwe ike ịrụ ọrụ ọ bụla masịrị gị, ya bụ, nke ahụ Wụnye ma ọ bụ iwepụ asụsụ. N'ihe kwesịrị anyị, anyị ga-anwa ịhọrọ nke mbụ, ya bụ, nke ga-enye anyị ohere "ịwụnye asụsụ".
Otu esi eme Windows 10 ngwa ngwa
Site na ịhọrọ nhọrọ a, anyị ga-awụfee n'akụkụ ọzọ nke windo na ebe, anyị ga-enwe ohere wụnye mkpọ asụsụ site na ọrụ mmelite ahụ site na Windows ma ọ bụ site na kọmputa anyị; Enwere ike iji nke ikpeazụ a ma ọ bụrụhaala na anyị ebudatara ngwugwu ahụ na kọmputa anyị. Ọ bụrụ n ’oge ụfọdụ anyị amata na Microsoft ma ọ bụ onye nrụpụta ihe nke atọ atụpụtala asụsụ na Spanish maka Windows 10, anyị nwere ike iji aghụghọ a na usoro anyị nwere ike ịhazi sistemụ arụmọrụ ka amasị anyị.
Etu esi ebudata asụsụ Spanish na Windows 10
Versiondị sistemụ kachasị ọhụrụ nke Microsoft, Windows 10, bịara na aka na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mmelite, ọ bụghị naanị na arụmọrụ arụmọrụ na-egosi arụmọrụ ka mma karịa ndị niile bu ya ụzọ, mana na-ewetara anyị mmụba na ntinye nke ọrụ ma ọ bụ mgbakwunye, nke mere na anyị ekwesịghị ịga na ebe nrụọrụ weebụ Microsoft ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ọ bụla iji nwee ike ịchọ mgbakwunye, dịka na nke a ọ nwere ike ịbụ asụsụ nke ụdị anyị nke Windows 10.
Mgbe ị na-ebudata ISO na weebụsaịtị Windows 10, Microsoft na-enye anyị nhọrọ iji họrọ asụsụ ntinye ka, n'oge niile, a ga-egosipụta ozi ahụ n'asụsụ Cervantes. Ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọ bụla a manyere anyị ịgbanwe asụsụ nke ụdị Windows anyị, Anyị ekwesịghị ịlaghachi na mbido wee wụnye ụdị ọhụrụ nke Windows 10, mana ozugbo site na nhọrọ nhazi Windows 10 anyị nwere ike ibudata mkpọ asụsụ ma gosipụta nke anyị chọrọ iji gosipụta na ndabara.
Iji budata mkpọ asụsụ ọhụrụ na Windows 10 anyị ga-emerịrị gaba dị ka ndị a:
Anyị gbagoo Ntọala> Oge na Asụsụa.
Na kọlụm aka ekpe pịa Mpaghara na asụsụ
N’akụkụ aka nri anyị na-aga Asụsụ wee pịa Tinye asusu.
N'okpuru ebe a bụ asụsụ niile dịnụ nke anyị nwere ike ibudata na Windows 10. Anyị kwesịrị họrọ asụsụ anyị chọrọ ma ọ bụ ya.
Etu ị ga-esi gbanwee n'etiti asụsụ na Windows 10
Ozugbo anyị mechara usoro niile gara aga, anyị ga - ahọrọ asụsụ anyị chọrọ iji na ụdị Windows anyị. Dị n'okpuru ọ ga - apụta nhọrọ atọ: Tọọ dị ka ndabere, Nhọrọ ma Hichapụ. Na nke a Anyị na-ahọrọ Tọọ dị ka nke ndabere ka asụsụ nke ụdị nke Windows 10 anyị gbanwee nke anyi hoputara. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọ laghachite n’asụsụ ala anyị, naanị anyị ga - eme otu usoro ah ịhọpụta asụsụ Spanish (mba ebe anyị nọ)
Etu esi ebudata asụsụ Spanish na Windows 8.x
Usoro iji budata asụsụ ọhụrụ iji gbanwee nke Windows na-egosi anyị nke ọma bụ Yiri ihe anyị nwere ike ịchọta na Windows 10. Usoro a bụ ihe ndị a:
Anyị na-isi Ogwe njikwa
Ugbu a, anyị bilie Asụsụ wee pịa Tinye asụsụ.
Ọzọ anyị ga-achọta asụsụ anyị chọrọ ịwụnye na ụdị nke Windows 8.x. họrọ ya wee pịa Tinye.
Ozugbo agbakwunyere, anyị ga-pịa asụsụ nke anyị gbakwunyere wee họrọ Budata ma wụnye mkpọ asụsụ, nke mere na Windows na-elekọta ibudata ya na PC anyị.
Ozugbo ebudatara, họrọ asụsụ anyị ga-eme ya Malitegharịa ekwentị anyị ya mere na asusu ndi Windows 8.x anyi gosiputara anyi gbanwere gaa na nke anyi hoputara.
Etu esi ebudata asụsụ Spanish na Windows 7
Windows 7 na-enye anyị otu ụzọ ahụ nsụgharị abụọ nke sistemụ Microsoft ga-esi nwee ike ịgbakwunye asụsụ ọhụrụ, yabụ anyị ga-aga na weebụsaịtị Microsoft iji budata asụsụ anyị chọrọ ịwụnye. Asụsụ ndị a kacha jiri eme ihe anyị nwere ike ịchọta ozugbo site na mmelite dị iche iche nke Microsoft eweputala nkwado nke ụdị a, mana ọ bụghị ha niile dị.
Spanish, na-enweghị na-aga n'ihu, dị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbanwe asụsụ nke anyị mbipute nke Windows 7 anyị ga-aga Asụsụ ngalaba dị na Control Panel. Ọ bụrụ na Kama, anyị chọrọ ịwụnye mkpọ asụsụ ọ bụla na Windows na nwa afọ adighi na ụdị Windows 7 nke anyị rụnyere, anyị nwere ike gaa na peeji nkwado Microsoft maka asụsụ niile dị ugbu a maka ụdị Windows a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Etu esi wụnye mkpọ asụsụ na Windows
Ka chifoo! Ọ ga-amasị m ịmata ebe m nwere ike ibudata mkpọ asụsụ ị na-asụ ebe a iji wụnye ya. Biko.
Taa 07/11/2017 anaghị arụ ọrụ, daalụ!
Ndewo, ihe niile na-enye aka, mana ọnọdụ m bụ na nhazi m anaghị enye m nhọrọ nke atọ iji "setịpụ dị ka ndabere" mgbe m gbakwunye asụsụ Spanish. Enweela m ma budata ya ọtụtụ ugboro ma ọ naghị enye m nhọrọ ahụ. Amaghi m ihe m ga eme ozo = (
Ugbo ala mbu nke interstellar di na mbara
Steam na Samsung Smart TV ga-enwe obi ụtọ site na ime ụlọ